shirqool The listicmaalka - Hordhac | Apg29
users Cash taswiiran sida dhallaan yar yar kuwaas oo iyaga u gaar ah oo wanaagsan ma oga.
Afar "wuxuush listicmaalka" weyn (Mastercard, Visa, American Express iyo Cunnada Club) ayaa la oggol yahay si ay u helaan badan yihiin a burburiyo ee lacagaha West ee. Waxaa laftiisa kontantlösheten ma aha oo kaliya in uu yahay negative, laakiin sidoo kale habka dhaqaale ah oo ka dambaysa this.
Waxaan hadda daabici doonaa shirqool listicmaalka ah "Cash oo keliya" taxane halkan on apg29. Buuga waxaa laga yaabaa in aan la ku salaysan Kitaabka Quduuska ah iyo iimaanka Christian, laakiin waa mid aad u xiiso in view ee bulshada caalamka dhaqaale ee gacanta ku sida MUUJINTII 13 qeexayaa.
Halkan loola dhaqmo ifafaale listicmaalka sida kaararka deynta, lacagta mobile listicmaalka iyo horumarka implants iyo tattoos electronic. Caddeymaha ay soo jeedisay in mustaqbalka ee jirka u dhow elektarooniga ah iyada oo aqoonsiga iyo macluumaad u adeegi doonaa sida kaararka labada credit, liisanka darawalnimada, baasaboorka, kaarka iyo wixii la mid ah. Codsi kastaa listicmaalka aan sidoo kale ka dhigan tahay in ay u badan tahay in user (marka laga reebo negative la technology oo dhan this) in mustaqbalka uu galay pitfall listicmaalka ah. Sababtan awgeed, kitaabkii isku dayo in uu ku siin a view guud ballaadhan ee jirka u dhow elektarooniga ah. Kontantlösheten ay yihiin lafdhabarta sida caadiga ah waxa loo yaqaan weyn bulshada walaalkiis.
lacagta listicmaalka caadiga ah ee hadda waxaa si xun ugu qaybsan inay sameeyaan labada kaararka deynta, taleefannada gacanta ama internetka. Inta badan waa ay dhacdo isku dhafan oo ka mid ah. bangiyada baahisey yihiin bangiyada Internet, bangiyada mobile iyo bangiyada telefoonka. isticmaalka sii kordhaya ee bangiyada, kuwaas oo qaatay marmarsiiyo lagu yareeyo lacagta. Xitaa kale oo laga yaabo in dan macnaha halkan ka badan kontantlöshet looga qabto. Tusaale ahaan, ATM, lacagta caddaanka ah, lacag caddaan ah gaadiidka, bangiyada, iyo lacag caddaan ah ee la soo dhaafay, laakiin ma yaraan. Wax walba kuwaas oo wada xiran tahay. A isbeddellada muddada dheer ayaa ka yar iyo wax ka yar caddadka lacag ah by xulashada listicmaalka. Laga soo bilaabo barta listicmaalka of view, lacagta yar la dulduleelkooda ah. Payment u dhexeeya shakhsiyaadka (asaaga-fadeed bixinta) Waxa kale oo badan oo ka jira oo leh telefoonada gacanta iyo siyaabo kale.
Waxa haddaba halkan waa Maraykanka iyo Sweden iyo sidoo kale dhowr waddan oo kale oo daboolay kitaabkii on. dhaleeceynta ba'an kaararka Account 'xoojineyso Maraykanka leeyahay Lagaga kaararka yaab Galbeedka. The shirkadaha credit card qaranka meel ka baxsan Mareykanka (oo sidoo kale si xoog leh negative) ma waxyeello ka sii markii ay ugu danbeyn gubaysa by kasta Rafaa card American. Tani ayaa dhashay adduunka oo keenay tallaabada dunida ka mid ah oo u dhaw in a kootooyin bixinta listicmaalka. Halkan, MasterCard ayaa meel gaar ah sababtoo ah waxa ay si toos ah ama si dadban baabbi'iyey labada Euro Card (Sweden) iyo Mondex (UK).
Buuggu wuxuu u qaybsan yahay qaybo iyo dhawr xabbadood oo dhererka kala duwan iyo content in la siiyo akhristaha isbedel ah oo aan daal qoraalka isku xidhan xad-dhaaf ah. Gagadiyaa Buuga u dhexeeya labada fiilooyin ugu weyn oo cas. horumarinta bulshada listicmaalka iyo ciidamada ama shaqsiyaadka, inta badan ee Sweden iyo Mareykanka in ay saameeyeen jihada listicmaalka ama iska caabiyeen. Tani waa isku qasan oo leh dhaleeceyn, talooyin iska caabin ah oo muran ka dhanka ah listicmaalka iyo Xujada lacag caddaan ah. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo lacag caddaan ah. Waxay u ogolaadaan iibsadaan si qarsoodi ah oo aan heli karaa, dhinac saddexaad ma waxaa ku lug leh iyo dadka si xor ah oo aan gacanta lacag ku siin karaan midba midka kale. Dadka intooda badan waa daacad ah. Laakiin abuuritaanka listicmaalka qof kasta oo daawaynaya sida haddii waxayna ahaayeen dambiilayaal.
Xaqiiqada ah in ganacsiga listicmaalka shisheeye ee gaarka ah leh ee gobolka iyo barakadii uu maamulka loo ogolaan waa in uu u bedelo lacagta kaash ah xukuumadda qaranka waa la sifaynayo qalloocan. Qof kasta oo jeclaan lahaa inuu arko qaabdarro iyo darana khatar ah cuntada iyo tamarta oo dhan waa la soo saaray lahaa gebi ahaanba ka baxsan Sweden, iyo xoogga waxaa ka mid ah siin lahaa dalalka soo saara. Laakiin kordhay kontantlöshet si khalad ah loo arkaa horumar caafimaad. Tan waxaa taageeray inta badan la sameeyo. The ka xun haddii ay tahay oo ku saabsan dalka keli ah soo saara. Marka laga kontantlöshet si marka Sweden asal ahaan hore u marka la eego lacagta la addoonsado oo dalka Mareykanka ah ee. arrimuhu socda An caalamiga listicmaalka qorhsaynta ah, waayo mustaqbalka quus suurto gal.
The dood cayriin xad-dhaafka ah waa iyada oo aan la barbardhigo muran ugu hackneyed waayo, kaararka deynta iyo kontantlöshet. Waxaad la kulmi nolosha dhabta ah iyo kuma fikirayo iyo dad caqli badan, kuwaas oo kaliya this mid ka mid ah dood been ah aawadiis waa la diyaariyey si ay allabari xoriyadiisa mustaqbalka adigoo isticmaalaya kaararka deynta. motargumenterar Buugani muran cayriin awood badan. Doorashadan listicmaalka waxaa had iyo jeer ay cabeen by eedeeyay marka laga reebo laga yaabaa in waqti xaddidan. Tani waa qashinka oo saafi ah, laftiisa waa nooc ka mid ah "dhac u gaabiya". Cash ayaa ajuurada lahayn.
Lacagta caddaanka ah waa farsamo ahaan adag, waxay u baahan tahay kaabayaasha farsamo ma aha sanqadhii baahsan iyo ammaan. nidaamyada listicmaalka The gaar ah ugu nugul. Si aad u hesho waa siyaado caydha
si fudud u qaataan kuwa todoba shan boqol jaamaha ku yaalla khaanadda saddexaad ee sigisyada ah cirradiisa qof gaar ah gub, oo iyaga la sigaarka lagu shido. sariirood Kontantlöshet masiiboyinka bixinta caalamiga ah. Noocan oo kale ah ma dhici karo lacag caddaan ah. Cash waa badbaadada iyo ammaanka.
Buuggan waxaa loogu tala galay sida gogo 'oo xujo ah ama mahrajaan in aakhirka waxay bixisaa sawir taariikhi ah, la joogo iyo mustaqbalka madow ee kontantlösheten. Ma jiro "cad" kontantlöshet. Wax walba waa madow. Ilo halkan loo isticmaalo si ay u muujiyaan kontantlöshetens "walax madow dhalaalaysa" waxaa ka mid ah Wikipedia, articles wargeyska, telifishinka iyo macluumaad si fudud loo heli Internet-ka in si fudud looga heli karo xitaa iyada oo aan tixraac loogu talagalay kuwa raba inay wax badan ka ogaadaan. Saafi ah kontantlöshet suugaanta in badan ayaa la isticmaalay sida isha waa buuggii guriga kaararka of Daniel Goldberg iyo Linus Lars Petersson.
dood ee lacag caddaan ah iyo kontantlöshet ee Sweden waa mid aad u leexiyay, si ka biyodiiday ee lacag caddaan ah. Dibad-ka dhanka ah kontantlöshet iyo lacag caddaan ah la heli karo, laakiin aad u dhif ah oo ka bulshada ka mid ah dadka iyo ganacsiga. Waa sida haddii sharciga lahaa kaliya hal dhinac xeer ilaaliyaha iyo difaacu ma. In dekedda ku fadhiya lacag caddaan ah. difaaca kaliya ee la heli karaa waa qareen ee shandad taagan waxaa murugo iyo aamuseen. qareen kasta ha ahaatee u muuqda in aanu. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay jiraan wax yar qareen kiiska. Waxa uu malaha kama weyna Teskedsgumman. Laakiin bal aynu sii daayo qareenka yar oo uu sidaas ku cuni kartaa weyn iyo geesi. Ha dibad ee Sweden ka dhanka ah kontantlöshet koraan xoog leh.
Marka la barbardhigo kale waa in aftida on awoodda nuclear ahayd doorasho kaliya. ballaarinta Strong. Waxaa intaa dheer, dadka looma ogola in ay codeeyaan xataa haa ama maya in this sababtoo ah bulshada ayaa go'aansaday in awoodda nuclear (akhri kontantlösheten) ugu danbeyn qaadan doonaan in ka badan tamarta kale oo dhan. Dadku in ay dhacdo lacag caddaan ah iyo wax ay odhan kontantlöshet. Laakiin afti noqon lahaa haddii ay taasi nacas ah. Waxaad xaq uma laha codayn ay ku soo rogi talisnimada (total kontantlöshet) ama hayn dimuqraadiyadda (lacagta caddaanka ah). Talisnimada waa in aan marnaba loo soo xulay.
Haddii Midowga Soofiyeeti ayaa la lahaa doonayay in la sameeyo communist dunida. Waxaa meel dhexaad ah mid aan jirin wax Maraykanka iyo dadka ayaa soo dhaweeyay. Ma aha in aad ku qasbi nidaamyada siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka. Haddaba moral ah. Laakiin markii Maraykanka ayaa isku dayaya inuu soo rogi on dunida inteeda kale ka listicmaalka ah iyo nidaamka maaliyadeed taas oo dibad aad u yar. Waxaa jiro wax farqi ah oo dhan in ay ciidamada of shuuciyad dunida. Kontantlösheten ma aha run ahaantii ku saabsan kaadh caag ah ee boorsada jeebka. Asal ahaan waa wax aad uga hornimaadno oo qoto dheer. Intaa waxaa dheer, Mareykanka kontantlöshetens genomruttne boqorkii aan tusaale ahaan wax la mid ah dunida oo dhan.
Banks översittaraktiga habdhaqanka inta badan waa in ay ku saabsan tahay maturity si ay u bilaabaan isticmaalaya kaararka deynta. users Cash taswiiran sida dhallaan yar yar kuwaas oo iyaga u gaar ah oo wanaagsan ma oga. Ugu dambeyntii iyaga u bislaadaan in hab Bank iyo waxaa laga yaabaa in ay naftooda u isticmaali tuunji, taas oo u dhiganta credit card ah. Xaqiiqada iyo dareen caadi ah show halkii in ay tahay oo ku saabsan maturity iyo dareen iska caabin ah oo ay diidaan in ay isticmaalaan kaararka amaahda. Waa ku filan la falanqayn aasaasiga ah iyo xaqiiqooyin kooban ururinta in la ogaado in wax oo dhan halkii ku saabsan damac bangiyada iyo bakhaylnimada.
Xitaa carruurta aadka u yar waxay leeyihiin doorashada. Waxay go'aan ka gaari karaan naftooda haddii ay doonayaan in ay cunaan ama aan marka cuntada la siiyaa. Go'aanso haddii ay doonayaan inay la kubad ama sanqadha ciyaaro. Laakiin dadka waaweyn Swedish waxaa loo ogol yahay oo dherer ma in la doorto lacagta caddaanka ah. riixo halkii waa nin koray oo lugaha dheer xaad joogtid. Waalidka kontantlöse sugaya oo aan dulqaad ku saabsan "ilmaha" si ay u bilaabaan la toy ah laad laadaan ka kooban garbaha farcan ciyaaro. oMarna waa kaararka deynta.
Inta lagu jiro muddada u dhaxaysa 50 qarnigii 80 qarnigii, Sweden weli Sweden ahayd iyadoo aan loo eegin in ay ahayd dawlad dimuqraadi ah bulshada ama hantiwadaag oo u talin jiray. Dalku weli la raacio daryeelka, ammaanka, dhexdhexaadnimada iyo madaxbanaanida. Markaas wax kasta oo bilaabay in ay ka sii daraan. Independence iyo aad u badan, ma ugu yaraan marka la eego dhaqaale la waayay. Caalamiyeynta nacsiiseen sidoo kale keenay dalkeenna galay ceejiso adag. Dhaqaalaha noqday listicmaalka iyo aad u badan.
Riksbanken amaanay arrimuhu gaar ah, laakiin waxa keliya oo keentay in masiibooyinka sida fadeexadii Panaxia iyo dhaca helicopter. Kharashka ku chockhöjdes maareynta kaashka bangiga leedahay. Waxaa jiray koror si aan macquul ahayn 1200 boqolkiiba. Banks sii waday in ay ka caban qaylo on qaali ah
maamulka kastoo ay naftooda ay inta badan yihiin kuwa eeda. Inta lagu jiro wakhtigan, wuxuu noqday laamaha bangiga sidoo kale listicmaalka in xawaaraha cabsi. The ganacsiga iyo bangiyada yihiin qaylo ah ka cabanaya oo ku saabsan sida qaali ah lacag caddaan ah marka Dhab ahaantii, waxaan macaamiisha iyada oo kOOsaaR dhaqaale this bixin.
darafka avgrundsdjupets hoose la gaaray in dowlada isbahaysiga. MAAREYNTA KAASHKA gowracay ku dhowaad gebi ahaanba meesha allabariga ee gaar. Tan iyo Sweden ayaa si tartiib ah u sii waday in ay simbiriirixan wuxuu dhoobada ugu hooseysa hoos dhinaca guud ee musiibada listicmaalka ah. baaritaan hoos dowladda isbahaysiga loola dhaqmo wareegga lacag kaash ah oo keliya oo aan xuquuqda dadku inay deposit sida bixi lacag bangiga. Qaar ka mid ah doorashada muddo dheer u dhexeeya lacag caddaan ah iyo kaar uma muuqato in la ogol yahay.
Dawladda ayaa ku xiga oo casaan-cagaaran aqbalay oo dhan martiqaad la mid ah in ay wadahadal ka mid ka mid ah wakiilada ugu weyn ee naqdiga ee kontantlöshet guud. Wasiirka A ka wada hadleen by martiqaad si ay dhammaan dhinacyada xiiso. Markan, xataa wakiilada kontantlöskritiska inay ahaadaan kuwa la warshadaha ammaanka sida iyo Iswiidhan oo dhan waa in ay ku nool yihiin. Waxa kale oo ay ahayd riksdagssak oo lacag caddaan ah. Laakiin gudbay saabsan siyaasadda kasta oo caafimaad oo lacag caddaan ah xorta nasiib darro aan la gartay laga yaabaa. naqdiya imika uun la sheegay dhinaca total kontantlöshet ayaa muujiyey xalka dhibaatada markii uu qoray in dawladda waa in ay dib u qaataan mas'uuliyadda lacagta.
Cilmi baarisyada qaarkood ayaa muujiyey in sida ugu badan siddeed ka mid ah tobankii qof ee rabto habka maareynta lacag caddaan ah wuxuu kordhin doonaa. Banks ayaa sheegaya in macaamiisha ilaaliyo caqli leh iyadoo la fogeynayo lacag caddaan ah, halka macaamiisha, markeeda, ku dhowaad oo dawarsanayay, si aad u hesho inaad halkaas iyaga leeyihiin. Dadka yeelan doonaan gudaheedana sinaba uma hortagi abuuritaanka listicmaalka ka gebi ahaanba ku gowracaa nidaamka lacagta. Iyada oo listicmaalka aasaaska loogu tala galay ugu horrayn Riksbanken ah, saddex bangiyada waaweyn, shirkadaha card iyo qayb ka mid ah aad u weyn oo siyaasadda, ganacsiga iyo warbaahinta. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah sanam hore pop. Iyada oo taageero ka been, bar-been iyo sawiro ku keentay dadka Swedish masaafo. iyaga Behind, iyo waxyaabo kale, dunida dhaqaale Mareykanka qararkiisa weyn iyo shirkadaha credit card.
Afar "wuxuush listicmaalka" weyn (Mastercard, Visa, American Express iyo Cunnada Club) ayaa la oggol yahay si ay u helaan badan yihiin a burburiyo ee lacagaha West ee. Waxaa laftiisa kontantlösheten ma aha oo kaliya in uu yahay negative, laakiin sidoo kale habka dhaqaale ah oo ka dambaysa this. In qaar ka mid ah nidaamka bulshada iyo dalal badan oo bal ogaada in wax wanaagsan in dhaqaalaha ku ordi doonaa baacsanayo iyada oo aan xayiraado. Waxaa loo arkaa nidaam is-maamula caafimaad. Tani waa halkii la barbar dhigo qaar ka mid ah junkie celebrity si adag in ay mararka qaar horeba is on qarka dhimashada.
Horyaalka Buuga inkastoo aanay ku saabsan aragtiyaha shirqool. Haddii aad rabto in aad isu wanaajiyo in aragtiyahan webi macluumaad meelo kale. Waxa ay noqon lahayd been u sheegaan in kitaabkan waa ujeedada. Waa heer sare ah shakhsi ahaan iyo shakhsi. Waxaa loogu tala galay sida call a kulul for halganka ka dhanka ah nidaam loo geeysanayo dhaqaale halkaas kontantlösheten waa nuxurka. Dhexdhexaadnimada waa in meel halkan saldhig caddayn ballaadhan. Waa qalad in ay isku dayaan in la helo faa'iidooyinka wax aasaas ahaan waa negative. Buugani waa call a in ay la wareegaan oo kale caws buu la soo dhaafay.
Waxaa jira dhowr sababood oo kitaabkii u yimid inuu noqon. Laakiin sababta ugu weyn iyo caws in qarxay dib awrta ahaa in inta badan ee bangiyada waxaa mar dambe loo ogol yahay lacagta caddaanka ah ee bangiga iyo ahaayeen listicmaalka. Haddii inta badan ee bangiyada ayaa weli inoo ogol yahay in ay ka baxaan lacagta bangiga si lahaa kitaabkan ma noqon. Waxa uu ahaa labada xiiso leh oo macno leh in ay qoraan buugga. Laakiin motivator kale oo weyn, waayo, qorniinkii ayaa sidoo kale cadhaysan oo ka jahowareersan dhaqanka ah goobaha listicmaalka munaafiqiinta iyo sahlay. Qoraaga doonayo in lagu wargeliyo, iyo dood badan oo loo Waxyoodo ahayn caabin gebiyo kontantlöshet ee Sweden.
isbeddellada listicmaalka iyo horumarka ka lacag caddaan ah u dhaco si cajiib ah u soomi. Kaliya dhamaadka shaqada ee buug, wax muhiim dhici aan la timid kitaabka. shalaay ayaa qoraaga ku saabsan qaar ka mid ah wax muhiim ah in la iman kitaabkan. Laakiin waa in mid ka mid sidoo kale ay joojiyaan qoraal waqti ku haboon. Sidee xiiso iyo natiijo wanaagsan ay tahay in ay qoraan buug, waa sababta oo ujeedadu in badan intii suurto gal si ay u akhriyaan.
Kontantlösheten cudurka loo arag ugu xumaa bulshada ee taariikhda dunida. Si buuxda u xiran matag fikirka, booguhu waxay, xab, malax, indhaha oo casaada iyo dhiig bax gudaha ah. dadka xagjirnimada oo doonaya in ay ku faafi kontantlöshet waa sida belaayo isu keena gob ah run ahaantii weyn oo afka ka dibna kaga tufay oo si toos ah hindhisto uninfected ah ee wejiga. Halkii caawimo ah kaga candhuufo sow ama raali ka suga samir kontantlöse in ay uga mahad celiyay. Xataa dadka runtii negative in kontantlöshet waxa ay u arkaan "sida ku qoran xiddigaha" sababta oo ah waxay u maleynayaa in aan micno lahayn xitaa isku dayin in ay u dagaalamaan. Buugani wuxuu doonayaa in uu muujiyo in oo u dagaalami karnaa waa ka dhanka ah listicmaalka ah.
Buuga ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka Warega ee 2015/16. Written farxad meel Sweden. Buuggan waxaa ka go'an in dhammaan carruurta Swedish nolosha embellish noo dadka waaweyn. Waxaa la ma ku qoran, waayo, carruurtii si ay u akhriyaan, laakiin in ay wax ka qaban in ay mustaqbal ku leeyihiin iyo sida dad xor ah ilaa iyo intii macquul.
Si loo sii waday.